सुर्खेतमा बच्चा जन्मिदा काठमाडौँमा बाबु पत्ता लगाउन तछाड मछाड ! भाइरल हुन अपनाउँछन् यस्ता फण्डा (हेर्नुस् भिडियो) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/सुर्खेतमा बच्चा जन्मिदा काठमाडौँमा बाबु पत्ता लगाउन तछाड मछाड ! भाइरल हुन अपनाउँछन् यस्ता फण्डा (हेर्नुस् भिडियो)
सुर्खेतमा बच्चा जन्मिदा काठमाडौँमा बाबु पत्ता लगाउन तछाड मछाड ! भाइरल हुन अपनाउँछन् यस्ता फण्डा (हेर्नुस् भिडियो)
भाडा नबढाए या सरकारले अनु दान नदिए गाडी नच लाउने यातायात व्यव`सायीको घोष`णा !! पुरा पढ्नु`होला
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो)